आँसुले भात मुछेर खाइरहेका सञ्‍जीव आफैँसँग प्रश्न गर्छन्, ‘के भयो जीवनमा ? (भिडियो) – Halkhabar kura
१२ आश्विन २०७७, सोमबार १८:२३
‘कोठामा ग्यास सकिएको छ । यतै खुलामञ्‍चमा खाना खान्छु अनि कोठामा गएर सुत्छु । तीन महिनाको कोठाभाडा तिरेको छैन, घरभेटीले भाडा तिर, नभए कोठा खाली गर भनेका छन् । वसन्तपुरस्थित उनको त्यो कोठा खोसिइसकेछ । चार महिनादेखि भाडा तिर्न नसकेका सञ्‍जीवको सबै सामान जफत गरेर घरबेटीले उनलाई कोठाबाहिर निकालिदिएका छन् । मनमा यो पीडा छचल्किएपछि उनी भक्कानिन थाले ।
खुलामञ्‍चको कोलाहलमा उनको क्रन्दन कतै बिलायो । आँसु पुछ्दै उनले भने, ‘मैले घरबेटीलाई भनेको छु, दुई महिनाजति पर्खिनु, यो सामान कसैलाई नदिनु, म जसरी पनि तिर्छु ।’ सञ्‍जीव अहिले नयाँ सडकको पीपलबोटमा रात बिताउँछन्, दिनभर खुलामञ्‍च, रत्नपार्कवरिपरि टोलाउँछन् ।
जागिर खोसिएपछि उनले नयाँ जागिर पनि खोजी गरे । ‘होटेल, रेस्टुराँ सबै ठाउँ पुगेको हुँ । जागिर छैन भन्छन्,’ सञ्‍जीवले भने ।‘मलाई केही पनि चाहिएन, मेरो दिदीले बर्थ डे गिफ्ट दिनुभएको कालो कोट, पाइन्ट निकाल्न पाएँ भने मलाई कोठा पनि चाहिँदैन ।’ दिदीले दिएको कोट, पाइन्ट लगाएर मोबाइलमा खिचेको तस्बिर देखाए, सञ्‍जीवले ।आँखाका डिलबाट पोखिन लागेको आँसु रोक्न उनले टाउको उठाएर आकाशतर्फ हेरे । यति गर्दा पनि केही थोपा आँसु मास्क छिचोल्दै गालातिर झरे ।
पाँचखालमा उनका तीन छोरा छन् । गाउँमा पनि आर्थिक अवस्था निको छैन । उनी भन्छन्, ‘घर गएर पनि के गर्नु, उता उस्तै हालत छ । झन् साह्रो छ ।’ काठमाडौंमा खाना नपाएर गाउँ आएको भन्‍ने थाहा पाएपछि समाजले खिल्ली उडाउने डरले पनि उनी गाउँ जान चाहँदैनन् । ‘गाउँमा, घरमा कसैलाई भन्यो भने आफ्नै खिल्ली उड्छ,’ सञ्‍जीवले बाध्यता सुनाए ।
Previous मौसम: झरीपछि खुल्दै आकाश, आज कुन प्रदेशमा कस्तो ?
Next आईपीएल : सुपर ओभरमा बैंगलोरको जित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा रानीपोखरीको उद्घाटन
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:०६
सांसद विकास कोष खारेज गर्न नमान्ने, अनि निःशुल्क उपचारबाट भाग्ने ?
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १०:४३
प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:४३
हेर्नुहोस् कार्तिक ६ गते बिहिबार अक्टोबर २२ को राशिफल, श्रीबगलामुखी माताले सबैको कल्याण गरुन
रु.९ अर्ब कमिसन लेनदेन – यसरी भयो बुढीगण्डकीमा चलखेल
श्रीमानलाई निद्राको औषधी खानामा खुवा’एर प्रेमीसँग गर्थिन यस्तो हर्कत (भिडियो भाइरल)
रा’हतको चामल मेयरले अरुलाई नै बाँ’डे !
५ कार्तिक २०७७, बुधबार २३:५६
५ कार्तिक २०७७, बुधबार २०:१८
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १९:४९
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १९:०५